Izinketho zokubophezela izibopho kanye nekusasa yizinhlobo ezine ezinkulu
Izinketho zokubophezela izibopho kanye nekusasa yizinhlobo ezine ezinkulu - Kanye nekusasa
Njengoba kubonisiwe ekuqaleni, uma oshade naye engazange athembeke, isinqumo esakho. Ukuqwasha okuphikelelayo, okuhlala isikhathi esingaphezu kwenyanga, ngokuvamile kuhambisana nezinkinga ezinkulu kakhulu, kuhlanganise nokucindezeleka.
Lesi sihloko sikhulume ngezinto ezine oyobe wenza kahle ngokuzicabangela uma ucabanga ngesehlukaniso. Ukuqaphela Izinkinga Ezinkulu Zokulala NGEZINYE izikhathi izimpawu umuntu anazo zingase zibonise ukuthi unenkinga enkulu yokulala.
ECarletonville kanye nase- Nelson Mandela Academic Hospital eMthatha; kanti lokhu kungenziwa nasezibhedlela zikahulumeni noma kodokotela abazisebenzayo abaqokwe nguMnyango Wezempilo. Owesifazane osemusha okuthiwa u- Isabella uthi, “ Ngicabanga ukuthi ngifuze ubaba, ngoba naye unayo le nkinga yokungenzi izinto kusenesikhathi.
Ekuqaleni ngenkathi siseba- ncane kakhulu, labo ababenomsebe- nzi wokusinakekela babeka phambili izindlela ezikhombisayo kanye nemi- thetho ukuqinisekisa ukuba siphe- phile. Lo somabhizinisi owaqala ngezingulube ezine ngo-, kodwa manje esezingaphezulu kuka- 2 000 wayengazitsheli ukuthi ibhizinisi lakhe lingachuma ngale ndlela.
Sifunda ukulalela empilweni yonke yethu. Uthando lokuba ngusomabhizinisi lwamgqugquzela ukuba ahambe engqongqoza emnyangweni eyahlukene kuze athole ulwazi namasu angamsiza ukukhulisa leli bhizinisi lakhe. Mar 02, · Isethulo Esifushane Ngemvelaphi Yokuvela kanye Nomsebenzi KaKristu Wezinsuku Zokugcina EShayina IShayina yindawo ehlala udrako omkhulu obomvu, futhi yindawo lapho enqaba khona futhi walahla uNkulunkulu okubi kakhulu kuwo wonke umlando. Izinketho zokubophezela izibopho kanye nekusasa yizinhlobo ezine ezinkulu.
Sihlezi sixoxa nje ezase sontweni kugcine sesixoxa ngabajolayo esontweni nababhebhanayo lezindaba zingiqhaneliswe uSindi unomzimba nezinqa nje ezinkulu. Ulwazi lweqiniso kanye nezimpe- ndulo zemibuzo yethu emikhulu ziza kithina njengoba silalela imiyalelo kaNkulunkulu.
Noma ngabe ukhethani, kufanele uyazi imiphumela.
Intela yezinketho zabasebenzi
Forex zegolide goderder forex ukuthula ibutho